ALASKAN HUSKY DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Alaskan Husky Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Qofka weyn ee Alaskan Husky oo si firfircoon ugu raaxeysanaya jiidista iyo jiidista milkiilaheeda skis
Liiska Eeyaha Iskudhafka ah ee Alaska
Alaska Huskies badanaa wey ka weyn yihiin Siberia Huskies . Alaskan Huskies badanaa way ka jilicsan yihiin dhismaha marka loo eego kuwa reer Siberianka ah. Sibeeriyaanku badanaa waxay leeyihiin buluug ama isku darka indhaha buluug iyo bunni, halka Alaskan Huskies ay badanaa leeyihiin indho bunni ah.
Alaskan Huskies ayaa ugu horreyn loo soo saaray sida eeyaha shaqeeya. Waxay leeyihiin dulqaad badan oo ku saabsan tartanka barafka leh marka loo eego Siberia Huskies. Si naxariis leh oo ciyaar leh, eeygan faraxsan ayaa aad u jecel qoyskiisa ama qoyskeeda. Ey yar oo wadnaha ah, waa kuwo xariif ah, dad jecel oo jecel, fudeyd badan oo debecsan, in kasta oo ay guud ahaan leeyihiin tamar badan, gaar ahaan sida eeyaha. Ku wanaagsan carruurta iyo saaxiibtinimada shisheeyaha, ma ahan ilaaliyeyaal, maxaa yeelay wax yar bay cabaan oo qof walba way jecel yihiin. Huskies waa kuwo aad u caqli badan oo tababaran , laakiin iyagu waxay leeyihiin maskax iyaga u gaar ah oo waxay adeeci doonaan oo keliya amar haddii ay arkaan ujeedada iyo haddii aadan muujin hoggaan, ma arki doonaan ujeedada inay ku adeecaan. Tababar waxay qaadataa dulqaad, joogtayn iyo fahamka dabeecadda eyga Arctic. Haddii aadan ahayn eeygan 100% adag, kalsooni leh, iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada , wuu ka faa'iideysan doonaa hadduu awoodo, noqosho ula kac iyo dhaqan xumo . Xayawaanku aad ayey u fiican yihiin wehelka orodka , illaa inta aysan kululayn. Guurguurku wuu noqon karaa adag tahay in guriga la dumiyo . Noocani wuxuu jecel yahay inuu qayliyo oo uu si fudud ku caajiso. Ma jecla inay noqdaan keligaa laga tegey , sidaa darteed haddii tani ay tahay nooca adiga, waxaad u baahan kartaa inaad tixgeliso inaad haysato laba. Husky cidla ah, ama Husky ah oo aan ku filneyn jimicsi maskaxeed iyo mid jireed noqon karo aad u burburin . Xusuusnow in Husky uu yahay eey wadhfiican oo qalbi iyo nafba leh. Waxay ku fiican yihiin xayawaannada kale haddii ay kula soo koraan eeyaha. Huskies waa cunno cunno badan waxayna u baahan yihiin cunto ka yar intaad filan karto. Noocani wuxuu jecel yahay inuu meeraysto. Alaskan Huskies waxay u samayn kartaa saaxiibo cajaa'ib leh dadka ka warqaba waxa laga filan karo xayawaankan quruxda iyo caqliga badan. In kasta oo ay jiraan waxyaabo ka reeban xeer kasta, haddana waxaa jira dhowr dabeecadood oo caan ah oo guud ahaan ka dhex muuqda xubnaha ku jira isirkan Arctic.
Badanaa laguuguma taliyo guryo, si kastaba ha noqotee waxay ku noolaan karaan guryo haddii si fiican loo tababbaray oo si habboon loo jimicsado. Alaskan Huskies aad bay ugu firfircoon yihiin gudaha waxayna ku fiican yihiin daarad weyn oo ood leh. Dharka culus awgood, eeyahaani waxay doorbidaan cimilo qabow. Mid waa inuu adeegsadaa caqli wanaag marka loo eego ilaalinta kuleylka adoo siinaya hooska ku filan iyo qaboojiyaha. Noocani wuxuu doorbidaa inuu ku noolaado xirmooyin.
Alaskan Huskies waxay u baahan yihiin qaddar jimicsi oo dheellitiran, oo ay ku jiraan socod dheer maalinle ah . Ka taxaddar jimicsi xad-dhaaf ah xilliga cimilada diiran. Waxay u baahan yihiin daarad weyn oo leh deyr dheer, laakiin siligga ayey ku aasayaan salka xayndaabka maxaa yeelay waxay u badan tahay inay qoddaan jidkooda ugana baxaan ugaarsiga.
eeyaha ka yar 50 rodol
Qiyaastii 10 -15 sano.
Ilaa 4 ilaa 10 eey
Koodhku uma baahna daryeel badan marka laga reebo inta lagu jiro labada jeer sanadkii xilliyada daadashada culus, marka ay tahay in si fiican loogu shanlo shanlo bir ah.
Alaskan Huskies si taxaddar leh ayaa loo soo saaray si loo soo saaro eeyaha ugu fiican ee suurtogalka ah. Noocyada Alaskan Husky waa noocyo la qorsheeyay oo farsamo ahaan lagu abtirsado, si kastaba ha noqotee looma tixgelinayo inay nadiif yihiin oo kama diiwaan gashan yihiin AKC ama CKC maxaa yeelay mararka qaarkood waxay ka gudbaan noocyada kale ee Waqooyiga iyo kuwa aan reer Waqooyiga ahayn si ay u soo saaraan eeyaha shaqeeya ee ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
Eeg tusaalooyin badan oo ah Alaska Husky
Sawirada Alaskan Husky 1
Sawirada Alaskan Husky 2
i tusi sawir ah wolfhound ah Ayrish
godka dibiga jack russell terrier mix
Ey yaryar 3 toddobaad jir ah oo horumar ah
Petit basset griffon vendeen isku darka